नयाँ मोबाईल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? नेपालमा रियलमी जिटी नियो २ भित्रियो - Parichaya.com
नयाँ मोबाईल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? नेपालमा रियलमी जिटी नियो २ भित्रियो
By परिचय	 On २५ कार्तिक २०७८, बिहीबार १०:४७ 0
विश्वमा तिब्र गतिमा अघि बढी रहेको स्मार्टफोन ब्रान्ड, रियलमीले औपचारिक रुपमा नेपालमा रियलमी जिटी नियो २ सार्वजनिक गरेको छ । जसको मूल्य ५४,१९९ रुपैयाँ रहेको छ । जसमा ८र१२८ जीबी स्टोरेज रहेको छ ।
लोकप्रिय फ्लागसिप किलर रियलमी जिटी लाइनअपमै आधारित यस नियो फ्लागसिप किलर रियलमी जिटी नियो २ धेरै स्मार्टफोन चलाउने प्रयोगकर्ताहरुको लागि बनाइएको हो जसमा प्राविधिक नवीनताका साथै सुन्दर डिजाइन रहेको छ । शुरुका ग्राहकहरुले तोकिएको भन्दा ३००० रुपैयाँ कम मूल्य ५१,१९९ रुपैयाँमा यो मोवाइल फोन खरीद गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।
रियलमी जिटी नियो २ लाई क्वालकम स्नापड्रागन डठण् छन् को मोबाइल प्लाटफर्मले पावर गरेको छ । यसको लम्बाइ १६२।९एमएम, चौडाइ ७७५।६ एमएस र उचाइ ८।६ एमएम रहेको छ । क्वालकम स्नापड्रागनले प्रयोगकर्तालाई सन्तुलित प्रदर्शन सँगै स्थिरताको अनुभव प्रदान गर्दछ ।
थर्मल जेलले यस फोनलाई शितल राख्दछ । रियलमीको इतिहासमै पहिलो पटक रियलमी जिटी नियो २ मा ८ तहका तीन आयामको तापक्रम नियन्त्रण गर्ने ४१२९ एमएम क्षेत्रफलमा बाफलाई चिस्याउने खिया नलाग्ने स्टिलको संरचना रहेको छ । चिस्यान क्षमतालाई विचार गर्दा यसले मूलधारको गेमहरु खेल्न निकै सहयोग गर्नेछ । एप्लिकेसनहरु र गेमहरु छिटो लोड हुन्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकले पाउने भए एनसेलको सहयात्री सिम
सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेमा सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राविधिक भेटघाट